Ngwa 4 iji chịkwaa Mac gị na iPhone | Esi m mac
Egburu | | Ngwa ndị ọzọ maka Mac
Storelọ Ahịa jupụtara na ngwa bara ezigbo uru, na-arụpụta ma na-arụ ọrụ, iPhone anyị na-ewetakwa ọtụtụ narị ohere. Nchikota nke abuo, ngwa ọdịnala na ngwaọrụ, na - eme ka ọ bụrụ ngwa ọrụ bara uru, ọ bụghị naanị maka izipu whatsapps ma ọ bụ ikiri vidiyo na YouTube. Site na iPhone anyị, yana site na ipadka anyị ma ọ bụ iPod, anyị nwere ike ijikwa Mac (ma ọ bụ PC) anyị site na anya, ịbụ narị otu narị puku, kilomita. Taa ka anyị wetara gị anọ ngwa dị nnọọ mkpa iji rụọ ọrụ a.
1 Apps ịchịkwa gị Mac
1.2 Google Chrome na Desktọpụ
1.3 Remote òké
Apps ịchịkwa gị Mac
Offọdụ n'ime ha ngwa ọdịnala ekwe ka ị na-ele dum desktọọpụ, otú ị pụrụ ịchịkwa a Mac zuru; ndị ọzọ, agbanyeghị, akọwapụtara nke ọma, mana otu osila dị ha nwere ike ịba uru dị ka mkpa gị si dị. Iji maa atụ, chee na enyi gị bi na mba ọzọ chọrọ ime ihe na Mac ya, n'agbanyeghị agbanyeghị ịkọwa ya, ọ gaghị aghọta ya, n'ihi na iji otu n'ime ndị a ngwa ọdịnala i nwere ike igosi ya ka ọ dị ndụ.
TeamViewer Ọ bụ ngwa kachasị ewu ewu, na n'ezie ị nụla ya karịa otu oge. Niile ị chọrọ bụ njikọ tontanetị jikọọ iPhone na Mac ma nwee ike ịchịkwa nke ikpeazụ site na ekwentị anyị. Na mgbakwunye, ọ bụ ngwaọrụ n'efu maka ndị ọrụ nzuzo nke na-arụ ọrụ nke ọma.
TeamViewer Ọ dakọtara na iPhone, iPad na iPod Touch na-agba ọsọ na iOS 7 ma ọ bụ karịa ma ị nwere ike ibudata ya ozugbo na njikọ a.
Google Chrome na Desktọpụ
Ngwaọrụ Google nyere dị oke mma yana, n'ezie, n'efu. Dị nnọọ download ngwa gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod Touch si ebe a, mgbe ị na Mac (ma ọ bụ PC) ị ga-enwerịrị ihe nchọgharị Chrome na mgbakwunye Iwepụ Desktọpụ Chrome. Site n'ebe ahụ naanị ị ga-achọ ikike nke onye ọrụ ọzọ iji nwee ike ijikwa akụrụngwa ahụ.
Dị ka aha ya na-egosi, Remote òké ọ ga-agbanwe gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka n'ime a mebere trackpad site na nke ị nwere ike ịchịkwa gị Mac, a zuru okè nhọrọ maka ndị oge mgbe ị chọrọ a òké na-enweghị otu. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma na ihe niile ị ga - achọ bụ ibudata ngwa na iDevide si ebe a (€ 1,99), zuo ezu maka gị Mac si ebe a, na njikọ intaneti ma ọ bụ data mkpanaka ma ọ bụ WiFi.
Na mgbakwunye, ọ nwere keyboard iji dee, ị nwere ike tinye olu gị na olu gị ma ọ dabara na Apple Watch.
Ngwa a yiri nke gara aga. Ọ nwere nsụgharị n'efu, ọ bụ ezie na ejedebeghị na ị na-enye keyboard na trackpad, yana ụdị Pro nke maka € 2,99 na-enye gị ohere ịnweta kọmputa dum. Ikwesiri ịwụnye ngwa mgbakwunye a na Mac gị. The free version bụ ebe a, na Pro version ebe a.
Mouse WiFi ọ dakọtara na iPhone, iPad, iPod Touch na iOS 5 ma ọ bụ karịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac kọmputa » Mac Pro » 4 ngwa ịchịkwa gị Mac si iPhone
Tim Cook na-aga India ịchọ nkwekọrịta maka mgbasa Apple